जनताले रुचाएका नेता, खारिएका उम्मेद्वार पोखरेलको प्रतिवद्धता | NewsMissile.com
जनताले रुचाएका नेता, खारिएका उम्मेद्वार पोखरेलको प्रतिवद्धता
Newsmissile November 16, 2017 राजनीति, समाचार0Comment
आसन्न आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरु शहरदेखि गाऊँ गाउँसम्म चियापान भेटघाट, पार्टी कार्यालय स्थापनामा लागेका छन्।
संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्ने आम निर्वाचनमा काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ प्रदेश ख मा केशव पोखरेल वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवारको सूर्य चिन्हबाट चुनावमा सहभागी भएका छन् ।
केशव पोखरेल दुई पटकसम्म भिमढुङ्गा गा.वि.स. का अध्यक्ष र काठमाडौ जिल्ला विकास समितिको एक पटक सदस्यको रुपमा जनप्रतिनिधि भएर कार्य गरिसकेको प्रखर उम्मेद्वार हुन् ।
काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ प्रदेश (ख) मा केशव पोखरेलको घोषणा र प्रतिवद्धताहरु यस प्रकार रहेको छ :–
 तपाईको योजना के के छन ?
भौतिकपूर्वाधारहरुको निर्माणमा जोड दिने छु। जसले गर्दा विकासलाई तिव्रता दिन सकिन्छ । नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९, १० र चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं.१, १२, १३, १४ र १५ लाई समावेश गरि काठमाडौ निर्वाचन क्षेत्र नं ९ प्रदेश ख बनेको छ ।
यस प्रदेशमा सांस्कृतिक, आर्थिक, कृषि, पर्यटन, खेलकुद लगायत विविध कारणले विकासका सम्भावना धेरै छन् । यी सबै महत्वका चिजहरुको उपयोग गरि यस स्थानका विकास गरिनेछ ।
 यस प्रदेश ख मा पर्यटनको के के सम्भावना देख्नु भएको छ ?
यस क्षेत्रमा पर्यटनको यति धेरै सम्भावना छ कि इन्द्रदह, स्वीजरल्याण्ड पार्क, काजि कालुपाण्डेको समाधिस्थल लगायत धेरै स्थानको महत्व छ। यी स्थानहरु छायाँमा परेको छ। यसको प्रचार प्रसारको अभावमा मानिसहरुले विर्सदै गएका छन् । काठमाडौको नजिक पद मार्ग बनाउन सकिन्छ थानकोट, भिमढुङ्गा, नर्सरी भन्ञ्याङ, थाप्ले लगायतका स्थानमा यसको विस्तार गरिनेछ ।
 ऐतिहासिक पक्षको बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
नेपाल एकिकरणको क्रममा उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका पृथ्वी नारायण शाहले किर्तिपुर र काठमाडौ आक्रमण गर्दा बनाएका गढी किल्लाको संरक्षण गर्ने । विभिन्न जात जातीको संस्कृति संरक्षणमा जोड दिने, धार्मिक महत्व बोकेको विष्णुदेवी मन्दिरको संरक्षण गर्ने योजना छ।
 आर्थिक उन्नतीका एजेण्डा के छ ?
यस प्रदेशमा धेरै कृषियोग्य भूमि छ । जसमा बलम्बु दहचोक लगायतका क्षेत्रमा च्याउ, तरकारी पकेट क्षेत्र वनाउन सकिन्छ । भिमढुङ्गामा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, कलंकी आसपासमा कृषि बजार स्थापना गर्ने र अन्य स्थानमा पशुपालन, कुखुरापालन लगायतको कार्य गर्न सकिन्छ। यस तर्फ पनि विशेष ध्यान जानेछ ।
 यूवा लक्षित कार्यक्रम के छन ?
युवा लक्षित विभिन्न कार्यक्रम हामीसंग छ। यस प्रदेश खेलकुदमा पनि अगाडी रहेको छ । नैकापमा रहेको फुटवल खेल मैदानबाट राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन भै रहेका छन्। सो खेलमैदानलाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउन जरुरी भएकोले यस तर्फ ध्यान जाने छ ।
अन्य स्थानमा सबैका लागि खेलकुद सधैका लागि खेलकुद अवधारणा अन्र्तगत खेलमैदान विकास गरिने छ । युवाहरुलाई स्वदेशी स्वरोजगार उन्मुख बनाइने छ।
Previous बालाचतुर्दशी पर्वका लागि तयारी पूरा, बहुुमूल्य गरगहना लगाएर नआउन भक्तजनलाई आग्रह
Nextदेवी-देवताका आकृतिहरु फेला पर्यो, दर्शनार्थीहरुको महा घुइँचो